सफल उद्यमी बन्न चाहानुहुन्छ ? पढ्नुस्, जान्नैपर्ने ११ टिप्सहरु - Suvham News
सफल उद्यमी बन्न चाहानुहुन्छ ? पढ्नुस्, जान्नैपर्ने ११ टिप्सहरु
एक सफल उद्यमी बन्ने चाहना सबैलाई हुन्छ । उद्यमशीलताको विकास भएको देश अन्य मुलुकको तुलनामा चाँडै समृद्ध भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । अमेरिका, जापानजस्ता मुलुक समृद्ध बन्नुमा त्यहाँ भएको उद्यमशीलताको विकास प्रमुख कारण मानिन्छ । नेपालको उद्यमशीलता भने सुरुवाती अवस्थामै छ । एकथरी मानिस धेरैपटक आफू उद्यमी बन्ने सपना त देख्छन् । तर, रोजगारी पाएपछि उद्यमी बन्ने सपना त्याग्दै जान्छन् । किनकि, उद्यमी बन्नु एकप्रकारले जोखीमयुक्त काममा आफूलाई संलग्न गराउनु हो । त्योभन्दा रोजगार मात्र हुनुमा जीवन सहज हुन्छ । समाजमा अर्काथरी मानिस पनि छन्, जो चाँडै आफूले मन पराएको काम सुरू गर्ने निष्कर्शमा पुग्छन् । जीवनको उद्देश्यलाई कामसँग जोड्छन् र काम÷व्यवसायको शुरुआत गर्छन् । उद्यमशीलता कसरी विकास गर्ने त ?
Prevजागीरका लागि अन्तर्वार्ता दिँदै हुनुहुन्छ ? यी जिज्ञासा कहिल्यै नराख्नुस्
Nextवावरिन्कालाई यूएस ओपन